INKQUBO YE-LCD SOUNDSYSTEM: I-AMERICAN DREAM ALBUM REVIEW - IINDABA
Ukuzalwa kwakhona kwe-LCD Soundsystem kuphawulwe nge-albhamu engaqhelekanga ethambekele ekuphelisweni: kobuhlobo, ngothando, ngamagorha, kuhlobo oluthile lwe-fek ye-geeky, kunye nephupha laseMelika ngokwalo.
Ewe uJames Murphy wawa eyakhe intsomi ye-rock'n'roll. Nguye lo mfo wangena kummandla we-stardom kwiminyaka eyi-15 edlulileyo ngeLosing My Edge, ingoma eyayihlekisa ngayo kwaye yahlawula umrhumo womculo, owawucinga indoda engummangaliso eyayibona yonke imicimbi engaphantsi komhlaba. usebenzise uluhlu lwamagama apholileyo kunawe njengekhaka elingenakudlula. Yayinengqondo into yokuba adibanise eyakhe bendikhona ngela xesha ngo-Epreli 2, 2011, xa i-LCD Soundsystem yadlala oko kwahlawuliswa njengomboniso wabo wokugqibela kweyona ndawo ibalaseleyo kwisiXeko saseNew York. Kwangoko kwakuyimbali, usuku olukhulu lwangaphantsi. Isiphelo esifanelekileyo. Ukugqibelela, mhlawumbi.
Njengomfundi we-ace yomdlalo-I-LCD libhendi malunga nebhendi ebhala umculo malunga nokubhala umculo, wayekhe wahlekisa-uMurphy wayesazi ukuba ngekhe ahlangane nje ukuze afumane umvuzo ophumeleleyo, edlala iingoma zakhe ezaziwa kakhulu kwiSpotify kuhlobo olo -Anagnostic, inani labantu abadanisa umdaniso wanceda ekuhlakuleleni kwii-2000s. Iya konakalisa ilifa kwaye iye ngokuchasene nayo yonke into ebimele i-LCD: ukuthembeka, intlonipho, uthando olucekeceke kodwa olunenyani lokuba umculo ungabumba njani ubuni bomntu. Ke nangona icwecwe elitsha belihlala licwangcisiwe okoko ibhendi yahlengahlengisa ngokusesikweni kwiinyanga ezingama-20 ezidlulileyo, ii-gigs ezizele zizinto ezinokungenelela zinokuziva zingaqhelekanga. Ewe bevakala kamnandi, kwaye onke amalungu abonakala onwabile ukuba aphinde adlale kunye, kodwa umxholo wawushukuxiwe. Inkqubo ye-LCD Soundsystem yayingasekho kwi-cusp ye-zeitgeist yehlelo. UMurphy usacula le inokuba lixesha lokugqibela ngexesha laBonke Abahlobo bam, nangona umgca wokugqibela wawuphelile.
Kwelakhe icala, uMurphy kutshanje uthembise ukuba angaze enze umboniso wokuthatha umhlala phantsi kwe-LCD kwakhona. Kodwa nangona i-albhamu yesine yeqela, Iphupha laseMelika , kuphawula ukuzalwa kwakhona, kukwabonakaliswa ziziphelo: zobuhlobo, zothando, zamagorha, zohlobo oluthile lwe-fek ye-geeky, yephupha laseMelika uqobo. Ezi zihloko ezinkulu, ezinzulu zeprojekthi eqale ngokukodwa njenge-goof, kodwa sisikhokelo uMurphy asithathileyo okoko Isandi seSilivere Umntu omkhulu udibanise ukuthanda kwakhe ngokubhabha is synths kunye nokuqaqamba malunga nobomi obufutshane bobomi. Ngoku, njengotata oneminyaka engama-47 ubudala womntwana omncinci, uMurphy usebenzisa ukuthanda kwakhe ixesha elide emva kwezandi zepunk kunye nezandi zobugcisa bokuqhuba izithethe; ialbham ibandakanya izikhombisi ezichaziweyo kuLou Reed, uLeonard Cohen, u-Suan's Alan Vega, kunye noDavid Bowie, bonke abadlulayo kwiminyaka ukusukela kwirekhodi lokugqibela le-LCD. Ngelixa uMurphy wayekhe wazithathela kancinci kwaye ngobuqili, baziva benobunzima kuninzi lwazo Iphupha laseMelika Imizuzu engama-70, uxanduva olushiyekileyo lwembali enyamalalayo lubonakala ngakumbi.
Kwiphepha, oko kunokuvakala ngathi yinto encinci, kodwa oku akunjalo. Phantse isiqingatha sealbham sixhaswe zizingqisho kunye neengoma ezivuselelayo ezithi uMurphy, owaphinda wadlala uninzi lwezixhobo ngokwakhe, waziwa ngazo. Kungekudala kuzakuba sisitshisi esiphilayo I-Emotional Haircut iyinto ekhanyayo malunga ne-rocker dude endala yokuzama ukunamathela kulutsha oluthile ngendlela entsha-eyenzayo-kodwa ayipheli ngesiqhulo esilula. Ingoma yengoma ivela ekuchongeni kukaMurphy ngalo mlinganiswa uthatha ii-pummeling frequency kwiivolumu eziphezulu kakhulu ukuze kupheliswe amaxhala okuguga. Unamanani kwifowuni yakho yabafi ongakwaziyo ukuyicima, uyadlala njengoko umculo ungabambi. Kwaye unamaxesha okuqinisekisa ubomi kwixesha lakho elidlulileyo ongenakukuphinda. Kwaoko kuyamangalisa, kuyothusa, kwaye kuyamangalisa ngokumangalisayo.
Uhlobo olufanayo lweemvakalelo luyangxola ngokugqabhuka kweTonite, efundeka njengombhalo ohlaziyiweyo ukuzikhusela kuhlobo oluthile lomculo ophelelwe lixesha-okanye, njengoko uMurphy oh-esazi ebeka, igqala elinomdla kwi-disc-shop inquisition ethunyelwe parry i-cocksure mem-stick ukungcola kunye nexesha lam lokuhamba kwexesha eliphakathi. Yeyona ntetho iphambili kwabo baziva bekhohlisiwe kukuhamba kwexesha ngokungxama kwamaxabiso e-punk egameni lokuthengisa uphawu kunye ne-elitism enemali. Ngokuqinisekileyo, oku kunokuba lula kuJames Murphy ukuthi-njenge-Coachella headliner kunye nomnini we-Williamsburg bar bar, akakho ngqo kwimisele ye-DIY-kodwa, njengoko umculo ubuyela umva kwimvelaphi yenkcubeko ethandwayo, ukucinga okunqwenelekayo okunjalo ' Ibuhlungu. Ubungqongqo buyavela kwakhona kwiTshintsho Yr Ingqondo, apho uMurphy afikelela kumacandelo okuphawula, kokubini ukuphinda-phinda nokubaphikisa abo bakuthandabuzayo ukubuya kweLCD Soundsystem. Emva kokugculelwa kunye nokungazithembi phakathi kweRobert Fripp-style guitar shocks, imvumi iza kwi-epiphany elula: Ungayitshintsha ingqondo yakho, uyaphinda, njengoko kuvuleka umkhondo ongapheliyo. Esi sisandi esikhululayo sokuphulukana nabalandeli.
Uluvo lotshintsho, nokuba kunokwenzeka okanye akunjalo, ibingumxholo ophindaphindiweyo kaMurphy, kwaye Iphupha laseMelika uye wamthatha amanyathelo athile asemthethweni kwisitayile sakhe esidumileyo. Ngelixa iingoma ze-LCD ezirekhodiweyo zeklasikhi ziqhelekile, banokuziva bengafuneki, izikhumbuzo ezingafunekiyo ezabalazela ukuthatha ubuqaqawuli obudlulileyo bukaMurphy. Ke ukuhamba kwerekhodi okushukumayo akunikezeli ngokwahlukeneyo, bayabonelela Iphupha laseMelika Elona xesha linomvuzo kwaye lisebenza njengezona zizathu zibalaseleyo zokuqhubeka kweli qela lihlaziyiweyo.
Thatha i-albhamu evulekileyo u-Oh Baby, ukuzama kukaMurphy ngohlobo lwe-tick-burner engathandekiyo entle ejika ukuzibulala kwaba yimifanekiso ye-NYC. Ingoma igqityiwe phakathi kwetempo. Kwaye uMurphy akahambi apha-uyakhwaza. Ngokuqinisekileyo. Ngesondo, nokuba. Ingoma yokwahlukana (uMurphy wadlula kuqhawulo mtshato malunga nexesha elichithwe yiLCD ngo-2011) wanamathela ndaweni ithile phakathi kwephupha elibi nenyani. Kwaye ngokungafaniyo neengoma ezininzi zeLCD, eziphawulwe kukuchazwa okukodwa komdali onganyanzelekanga, u-Oh Baby uziva ebanzi kwaye emema. Awunyanzelekanga ukuba ube ngumabhalana ogcina irekhodi ukuze uqonde ngokupheleleyo ukuntsonkotha kwale ngoma. Njenge-Suicide's Dream Baby Dream, eye yagutyungelwa ngumntu wonke ukusuka eBruce Springsteen ukuya kuNeneh Cherry, Oh Baby luhlobo lomkhondo olunokutsalwa ngempumelelo ngumninimzi-mboniso wentshatsheli u-Ariel Pink okanye Rat Pack redux uMichael Bublé.
UMurphy uqhubeka ephupha ngento endikade ndiyenza, enye ephumeleleyo ngaphandle. Kubonakala ngathi ujonga kwixesha elidlulileyo, kwiimpembelelo zakhe zamatye, ezama ukujongana namandla abo amangalisayo. Ingoma yokukhangela iziswa ekugxilwe kuyo yi-stalking bassline kunye ne-hulking, i-drummy beat-turn-turn indlebe yakho ngendlela efanelekileyo, kwaye yile nto i-albhamu ye-Led Zeppelin post-punk yayingavakala ngathi, kunye necitarita yesigingci esibuhlungu esiza phakathi isihogo. Ukuhlala kule ndledlana yobudemon, phantse umzuzu we-10 ophakathi ulala njani? Uqhwithela, uyonwaba, kwaye unobundlobongela. Ukwabelana ngegama no-John Lennon ngo-1971 okwehliswayo kuka-Paul McCartney emva kokupheliswa kwe-Beatles, le ngoma ngokuqinisekileyo iyisalvo ejonge iqabane lika-Murphy elahlukanisiweyo kwimveliso ye-DFA, u-Tim Goldsworthy-aka ileyibhile yomfo u-Murphy wamangalela phantse i-100, 000 yeedola kwimali engekhoyo Ngo-2013, umfana owabiza uMurphy ngokuxhaphaza kakhulu kunye nesociopath, kwaye wavuma ukuba namaphupha angaqhelekanga aphindaphindiweyo 'okusweleka kweMidlalo yeTrone' kwimbali yamva yomlomo waseNew York. Ndidibane kwigumbi lokuhlambela . Ke, ewe. La madoda mabini akasathandani.
Kuwo onke amagazi amabi, ulala njani? ayisiyi-rocker ekhutshwe ngemipu okanye ngestiji esine-lyk skewing. Kubuhlungu ekwakhiweni kwayo, ukuqokelela ingxolo eyoyikisayo kunye neethoni ze-bass synth tones ngaphambi kokuba isingqisho siphelele sigqibe emva kwemizuzu emihlanu. Okwangoku, uMurphy uxuba ukungcikiva okungummangaliso kunye nokuswayipha ngokuthe ngqo, ekhwaza ngokunzulu kumxube: Kuya kufuneka ndivume: Ndiyakukhumbula ukuhleka / Kodwa hayi kakhulu. Le yityhefu, kodwa ilawulwa ngobuchule yityhefu. Ingoma isebenza ngokumangalisayo ngaphandle kwayo nayiphi na i-backstory, njengendawo jikelele, yokupompa amanqindi ebanzi ejolise kubahlobo bangaphambili kuyo yonke indawo, kodwa yeyona nto imbi ngakumbi ekujolise kuyo engqondweni. Uphantse ube nemfesane ngeGoldsworthy-kodwa emva koko isingqi siyadibanisa kwaye, ke, kufuneka ukuba wenze into engalunganga ukuze afanelwe lihlazo elinje. Kwaye kunjalo, kukho into emuncu ekuvumeni ukulahleka komntu osaphilayo, ubukho obukrakra obungasaziva.
Esinye isiporho sihlala kwingoma yokugqibela ye-albhamu, iBlack Screen, kodwa imeko igungxuliwe: Umntu akasaphili okwangoku ukhumbula kakhulu. Alikho igama elikhankanyiweyo kwingoma, kodwa kukho isizathu sokukholelwa ukuba ngumyalezo onesidima kuDavid Bowie, owaba ngumhlobo kwaye wasebenzisana noMurphy kule minyaka imbalwa idlulileyo yobomi bakhe. Ngapha koko, uMurphy wayekhe wagqalwa njengomvelisi kunye kwi-albhamu yokugqibela ka-Bowie, Mnyama , nangona ekugqibeleni enikezele ngokusesikweni ngokusemthethweni kwingoma ezimbalwa. Ukusukela ukuba ezinye zeengoma ezibalaseleyo zeLCD Soundsystem ziye zangumlinganiso ofihliweyo wothando kwimpembelelo kaBuyie, kwakutheni ukuze uMurphy angathathi ngokupheleleyo ithuba lokusebenza nolunye uthando lwakhe olunzulu lomculo? Iscreen esimnyama sisinika iimpendulo. Ndandisoyika kwigumbi, uMurphy ucula ngelona lizwi lincinci, ndiyeke ukujika. Le ayisiyi flip izimvo; lusizi. Ukuzisola. Kubuhlungu ukuba sesichengeni. Ingoma ihamba kunye ne-sonar-blip echanekileyo, kunye noMurphy bekhumbula ubudlelwane bakhe nesithixo sakhe ngokuthula, ekugqibeleni bafaka umfanekiso we-interstellar infinity. Iqukunjelwa ngee-pulses kunye nepiyano ezingavakali ngaphandle kwendawo kwindawo emnyama ye-Bowie rock-opus-isiphelo esinokuqhubeka ngonaphakade.
iingoma ezikhokelwayo ezizezomoya
Paul mccartney mccartney ii iingoma
ukuhlafuna gum iorenji yegazi
Iqela lebhola ekhatywayo laseMelika lihlala ekhaya